တရုတ် LBZ-LH အလိုအလျောက်တိုက်ရိုက်စက္ကူအိတ်စက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖွဲ့စည်းခြင်း & အရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိက | Luzhou
LBZ-B ကစက္ကူအစားအစာ Box ကိုစက်ဖွဲ့စည်းခြင်း
LBZ-BII semi-automatic စက္ကူညစာစားပွဲဒီကနေ့ရဲ့ဟင်းလျာစက်
LBZ-LA က သီချင်းဆို. -side-PE-coated စက္ကူဖလားဖွဲ့စည်းခြင်းစက်
LBZ-Lab အပြည့်အဝအလိုအလြောကျ high-speed စက္ကူ CUP machine
LBZ-LB နှစ်ချက် side PE စက္ကူဖလားစက်ဖွဲ့စည်းခြင်း coated
LBZ-LC လူပျိုဘေးထွက် PE စက္ကူ Bowl စက်ဖွဲ့စည်းခြင်း coated
LBZ-ld နှစ်ချက် side PE စက္ကူ Bowl စက်ဖွဲ့စည်းခြင်း coated
LBZ-LE နှစ်ချက် side PE စက္ကူ Bucket စက် coated
LBZ-LH အလိုအလျောက်တိုက်ရိုက်စက္ကူအိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း & ထုပ်ပိုးပြီးစက်
စက်ဖွဲ့စည်းခြင်း LBZ-LS မြှောင်းပုံထဲက-အင်္ကျီလက်
စက်ဖွဲ့စည်း LBZ-LT အလိုအလျောက်စက္ကူရေခဲပြင်ပြွန်
LBZ-LT အထူးစက္ကူဖလားစက် (High ခွက်ကိုချမှတ်ခြင်းစက်)
စက်ဖွဲ့စည်းခြင်း LBZ-LW အမြင့်မြန်နှုန်းစက္ကူပြား
offset ပရင်တာ (Flexo ပရင်တာ)
PE Coating စက်
Ruian စီးတီး, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်
အကျဉ်းမိတ်ဆက်: ပူပြင်းတဲ့အချိုရည်များကနာကျင်ထံမှလက်တို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ inorder ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်, သောက်စရာရေပူ, ကော်ဖီနှင့်ပူခေါက်ဆွဲသည့်အခါရန် ,,,, တစ်ဦးတည်းသာမြို့ရိုးကိုစက္ကူခွက် / အင်တုံ, အရမ်းပူဖြစ်လာကျနော်တို့ / အင်ျကြီကိုထွက် (ကစွပ်အိတ်လုပ် အတွင်းခွက်ကို / ပန်းကန်ကျော်ဂျာကင်အင်္ကျီ) ။ အဲဒီမြို့ရိုးနှစ်ထပ် (အလွှာ) ခွက်ကို / ပန်းကန်ကိုဆိုလိုသည်။ မော်ဒယ် LBZ-LH အလိုအလျောက်တိုက်ရိုက်စက္ကူအိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း & ထုပ်ပိုးပြီးစက်စက္ကူခွက်ကို / ပန်းကန်စက်တစ်ခုဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းအတော်ပင်နှင့် Automation ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပါတယ် ...
ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်, သောက်စရာရေပူ, ကော်ဖီနှင့်ပူခေါက်ဆွဲသည့်အခါ ,,,, တစ်ဦးတည်းသာမြို့ရိုးကိုစက္ကူခွက်မှ / ပန်းကန်လုံးတွေအရမ်းပူဖြစ်လာပူအချိုရည်များကနာကျင်ထံမှလက်တို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ inorder ကျနော်တို့ကျော် (ကုတ်အင်္ကျီ / ဂျာကင်အင်္ကျီကိုထုတ်) မှာလက်လုပ် အတွင်းခွက်ကို / ပန်းကန်။ အဲဒီမြို့ရိုးနှစ်ထပ် (အလွှာ) ခွက်ကို / ပန်းကန်ကိုဆိုလိုသည်။
မော်ဒယ် LBZ-LH အလိုအလျောက်တိုက်ရိုက်စက္ကူအိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း & ထုပ်ပိုးပြီးစက်စက္ကူခွက်ကို / ပန်းကန်စက်တစ်ခုဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းအတော်ပင်, နဲ့ automatic စက္ကူ-နို့တိုက်ကျွေးရေး, ပိတျထားသော, ဒုက္ခစိုးရိမ်ဖွယ်ရာနှင့်ရေတွက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပါတယ်။
, နှစ်ချက်မြို့ရိုးကိုစက္ကူခွက်နှစ်ခုအလွှာ (နံရံများ) ရှိသည်အတွင်းပိုင်းအဖြူရောင်ခွက်ကို (ပန်းကန်) ဖြစ်ပါသည်, ထိုအထဲက layer ကိုနှစ်ဆမြို့ရိုးကိုစက္ကူခွက်နှစ်မျိုးစက်တွေလိုအပ်အောင် printing.So နှင့်အတူဂျာကင်အင်္ကျီဖြစ်ပါတယ်
, 1.to အတွင်းဖလားဖြစ်စေ , LBZ-LA ကသို့မဟုတ် LBZ-LB စက္ကူခွက်ကိုဖွဲ့စည်းစက်ကိုအသုံးပြုနိုင်
သည့် LBZ-LH အလိုအလျောက်တိုက်ရိုက်စက္ကူအိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း & ထုပ်ပိုးပြီးစက်သုံး, 2.to ယင်းအထဲကဂျာကင်အင်္ကျီကိုလုပ်
သင့်လျော်သောစက္ကူဖလား Size: 6oz-20oz မှစ. သို့မဟုတ် 20oz-60oz
ပြင်ပမှာထုပ်ပိုး၏အတန်းပစ္စည်း: (ချောမွေ့နှင့်တောက်ပပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူ) ပြာအောက်ခြေ၏ Wite ပျဉ်စက္ကူ
ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှု: တစ်မိနစ်လျှင် 40-50 PC များ
စုစုပေါင်းပါဝါ:4KW
Power ကအရင်းအမြစ်: 380 V ကို, 220 V50 Hz, 60 Hz သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်အခြား
မြေတပြင်လုံးစက်အလေးချိန်: 850 ကီလိုဂရမ်
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အရွယ်အစား (L ကိုက x W x ကို H ကို): x ကို 1260 x ကို 2000 2450 မီလီမီတာ
အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု, စဥျက Optical ထိန်းချုပ်ထားသည် non-အဆက်အသွယ် switch ကိုချမှတ် Micro-controlled transducer, Step-လျော့နည်းမြန်နှုန်းညှိနှိုင်းမှု
ကပိတျထားသောအဆိုပါထွက်-side Jacket (ကုတ်အင်္ကျီ) ultrasonic စနစ်က
အဆိုပါ input ကိုမှအတွင်းခွက် (ချော) Feed, အလိုအလျောက်အဆိုပါထွက်စွပ်အိတ်ဖို့အတွင်းစိတ်ခွက်ကိုစုပ်ယူ
အလိုအလျောက် Agglutinate mucilage နှင့်အတူစက္ကူခွက်ပေါ်ထွက်အလွှာ
စျေးပေါတဲ့ operating ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အနိမ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု,
အထက်ပါပုံရိပ်ကိုပြသ Dirrect စွပ်အိတ် ခွက်ထုပ်
အထက်ပါပုံရိပ်ကိုပြသ Hollow စွပ်အိတ် ခွက်ထုပ်
ယခင်: Online Exporter Paper Coating Machine
နောက်တစ်ခု: LBZ-LT အထူးစက္ကူဖလားစက် (High ခွက်ကိုချမှတ်ခြင်းစက်)
စက်ဖွဲ့စည်းခြင်းစက္ကူနေ့လည်စာ Box ကို
LBZ-LT အထူးစက္ကူဖလားစက် (High ခွက်ကို makin ...
M ကဖွဲ့စည်းခြင်း LBZ-LA က သီချင်းဆို. -side-PE-coated စက္ကူဖလား ...
Adress: No.25, Linyang စက်မှုဇုန်ဧရိယာ, Feiyun မြို့, Ruian စီးတီး, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်
ဖက်စ်: 0086-577-65590638 (ပို့ကုန်ဦးစီးဌာန)
လမ်းညွှန် , Hot ထုတ်ကုန်များ , မြေပုံအညွှန်း , amp မိုဘိုင်း
တစ်ခါသုံးစက္ကူဖလားစက် , စက်ထုပ်ပိုးပုံး Box ကို၏စျေးနှုန်း , High Quality Paper Cup Making Machine, Facial Tissue Paper Machine,